Marketing amin'ny atiny ho an'ny trano sy tany | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 14, 2013 Alatsinainy Oktobra 14, 2013 Adam Small
Rehefa nanorina izahay Agent saosy fampifangaroana tranokala, fampidirana IDX, fitsangantsanganana, fitsangatsanganana an-tsokosoko, fitsidihana horonan-tsary, marketing amin'ny mailaka, fandefasan-kafatra SMS ary fanontana, fantatray fa ny marketing amin'ny atiny dia lakilen'ny fanentanana ny varotra bebe kokoa amin'ny agents. Ary, tsy mahagaga raha mahita ny valiny lehibe indrindra sy ny taha akaiky indrindra ireo masoivohonay izay manararaotra ny sehatra.
Placester dia namolavola ity sary ity izay miresaka ny fiantraikan'ny marketing atiny lehibe amin'ny indostrian'ny Real Estate. Placester dia manangana tranokala tompon-tany mandray andraikitra manambatra endrika tsara, fampiantranoana ary fampidirana IDX / MLS.
Tags: idx fampidiranaSary torohayplacestervarotra sy hofa fananana mifakamarketing amin'ny atiny tranovarotra tranotranokala
Oct 15, 2013 amin'ny 4: 57 AM
Lahatsoratra tsara! Fampahalalana marina .. Tena namaky be aho! Misaotra ny fizarana!